သတို့သမီးဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ပျော်မြူးနေတာလေးကို ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ချပြရင်း သူမပရိတ်သတ်တွေကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း – Online News Post
သတို့သမီးဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ပျော်မြူးနေတာလေးကို ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ချပြရင်း သူမပရိတ်သတ်တွေကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
ရိုးရှင်း တဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား ကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ နှလုံးသား ကို အပိုင် သိမ်းထား နိုင်တဲ့ အပျိုကြီး မမ မအေးသောင်း က တော့ အနုပညာ လောက မှာ နှစ်ပေါင်းများ စွာ အောင်မြင်မှု တွေရနေ တဲ့ မင်းသမီး တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် အောင်မြင် တဲ့နေရာ တစ်နေရာ မှာ ရပ်တည် နေနိုင်တဲ့ မအေးသောင်း က အခုဆို ရင် အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင် မပြုသေးပဲ အလုပ်တွေ ကိုသာ ကြိုးစား လုပ်ကိုင် နေသူ ဖြစ် ပါ တယ် ။ အရွယ် ရောက်ပြီး အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ပီပီ ချစ်သူ ရည်းစားလည်း ရှိတဲ့ မအေးသောင်း က သူမရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို တရားဝင် မိတ်ဆက် ပေးထား ပြီးပြီပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
သာယာ တဲ့ အချစ်ရေး တစ်ခုကို တည်ဆောက် ထားတဲ့ မအေးသောင်း က တော့ အပျိုကြီး ပီပီ စကား တတ်ပြီး ချစ်ရ သူကို ကြွေဆင်း သွားအောင် ပြောတတ် သူလေးတစ် ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကနေ့မှာ လည်း မအေးသောင်း က သူမရဲ့ ရှုတင် ရိုက်ကွင်းပေါ်က အမှတ်တရ လေးဖြစ်တဲ့ အဖြူရောင် သတို့သမီး ဝတ်စုံ လေးဝတ်ပြီး အချစ်ရ ဆုံးချစ်သူကို “Love you 3000 my Iron Man 🥰🥰🥰 ” ဆိုပြီး ချစ်စဖွယ်လေး ပြောလာတာ ကို တွေ့ရပါတယ် … .
မအေးသောင်း ကတော့ လက်ထပ်ဖို့ အရေးကို ထုတ်မပြော သေးပေမယ့် ပရိသတ်တွေ ကတော့ ချစ်ရ သူနဲ့ အမြန်ဆုံး ရွှေလက်တွဲ လက်ထပ် စေချင်ကြ ပြီပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ အေးဝတ်ရည်သောင်း တို့ ချစ်သူ နှစ်ယောက် အမြန် ဆုံး လက်ထပ် ပြီး သာယာတဲ့ အိမ်ထောင် တစ်ခုကို အတူတူ တည်ဆောက်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆု တောင်းပေး လိုက် ပါတယ်နော် ။ ဖတ်ရှု ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက် ပါတယ် … .
ရိုးရွင္း တဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရား ေၾကာင့္ ပုရိသေတြ ရဲ့ ႏွလုံးသား ကို အပိုင္ သိမ္းထား နိုင္တဲ့ အပ်ိဳႀကီး မမ မေအးေသာင္း က ေတာ့ အႏုပညာ ေလာက မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြရေန တဲ့ မင္းသမီး တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ တဲ့ေနရာ တစ္ေနရာ မွာ ရပ္တည္ ေနနိုင္တဲ့ မေအးေသာင္း က အခုဆို ရင္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ မျပဳေသးပဲ အလုပ္ေတြ ကိုသာ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ ေနသူ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ အရြယ္ ေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ပီပီ ခ်စ္သူ ရည္းစားလည္း ရွိတဲ့ မေအးေသာင္း က သူမရဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ပရိသတ္ေတြ ကို တရားဝင္ မိတ္ဆက္ ေပးထား ၿပီးၿပီပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။
သာယာ တဲ့ အခ်စ္ေရး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ မေအးေသာင္း က ေတာ့ အပ်ိဳႀကီး ပီပီ စကား တတ္ၿပီး ခ်စ္ရ သူကို ေႂကြဆင္း သြားေအာင္ ေျပာတတ္ သူေလးတစ္ ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီကေန႔မွာ လည္း မေအးေသာင္း က သူမရဲ့ ရႈတင္ ရိုက္ကြင္းေပၚက အမွတ္တရ ေလးျဖစ္တဲ့ အျဖဴေရာင္ သတို႔သမီး ဝတ္စုံ ေလးဝတ္ၿပီး အခ်စ္ရ ဆုံးခ်စ္သူကို “Love you 3000 my Iron Man ” ဆိုၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေလး ေျပာလာတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္ … .
မေအးေသာင္း ကေတာ့ လက္ထပ္ဖို႔ အေရးကို ထုတ္မေျပာ ေသးေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြ ကေတာ့ ခ်စ္ရ သူနဲ႔ အျမန္ဆုံး ေရႊလက္တြဲ လက္ထပ္ ေစခ်င္ၾက ၿပီပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ေအးဝတ္ရည္ေသာင္း တို႔ ခ်စ္သူ ႏွစ္ေယာက္ အျမန္ ဆုံး လက္ထပ္ ၿပီး သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုကို အတူတူ တည္ေဆာက္နိုင္ ၾကပါေစလို႔ ဆု ေတာင္းေပး လိုက္ ပါတယ္ေနာ္ ။ ဖတ္ရႈ ေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံးလည္း သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ေန႔ေလး တစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ ပါတယ္ … .
Previous post အဓိပ္ပါယ်ပါလွန်းတဲ့ အကြည့်တွေကြောင့် အများရဲ့ထင်မြင် စနောက်ခြင်း ခံနေရတဲ့ မင်းမော်ကွန်းနဲ့ ထွန်းထွန်း
Next post စွဲဆောင်မှုပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေက အသဲယားစရာကောင်းနေပြီး မိမိုက်လွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေတဲ့ မမသင်ဇာရဲ့ အလန်း ဗီဒီယိုလေး